Fantsom-barahina varahina | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Hazo fanondrahana varahina
Tanjona: Fampiasana varahina varahina sy varahina varahina ampiasaina amin'ny tavoahangy rano Materia mafy, fotsy fotsy
Frequency 200 na 280 kHz (matevina miankina)
Fitaovana fampidirana fitaovana fanamorana DW-UHF-10KW, lohan'ny asa an-tsela miaraka amin'ny capacitors roa 1μF ary ny famolahana helikoptera 3
Vokatr'izany: Volon-koditra telo no ampiasaina mba handaminana ampahany betsaka amin'ny ampahany. Ny ampahany dia tafangona miaraka amina rotsak'orana ary entona matevina ary avy eo fehezina. Ny vanim-potoan'ny hafanana dia miovaova amin'ny ampahany amin'ny ampahany amin'ny ampahany midadasika izay latsaky ny minitra 3 ary ny ampahany kely kokoa dia mihaona amin'ny latsaky ny 20 segondra. Taorian'ny fanamafisana ireo faritra ireo dia voavono.
Ny fiverimberenana: ny fehezin'ny rafitra fanamafisana ny induction dia manohana ny dingana iray izay tena azo averina.
Toe-karena: mamela ny fampiasana haavon-tsolika avo kokoa noho ny lelafo
Sokajy Technologies Tags Hazo fanondrahana varahina, Famolavolana varahina mba hanaovana tavoahangy miaraka amin'ny induction, Fanaraha-maso ny fanondranana metaly, pandehan'ny varahina, RF tapitrisa tapitrisa varahina
Ny famolahana ny ravin-davenona mba hodiavina matevina amin'ny induction
Tanjona: Ampiasaina ny fanamafam-panafody mba hampidirana tavoahangy vita amin'ny varahina ho an'ny fitaovana varahina ampiasaina amin'ny tady matevina. Ny fanodinana dia tokony hitranga ao anatin'ny rivotra iainana ao Nitrogen ary 4% Gas hydrogen. Ny fitefena enta-mavesatra dia miempo ao amin'ny 1190 ° F, fa ny ampahany dia mila fehezina eo ambany 1300 ° F. Ny ampahany dia mila atao amin'ny 175 200 ka hatramin'ny 18 isaky ny ora izay midika hoe XNUMX segondra amin'ny fotoana fampangatsiahana isaky ny ampahany.
Fantson'ny varahina vita amin'ny varahina, 0.5 ″ OD ary 2 ″ lava, fametahana varahina, fiovan'ny toetr'andro, tsy misy flux.
Ambony 1190 ° F fa tsy mihoatra ny 1300 ° F
Fitaovana: DW-UHF-10KW ny famokarana herinaratra fanamafisam-pahefana mahery vaika amin'ny famoahana herinaratra telo (3), valo (8) mifandraika amin'ny totaliny 0.66 μF, ary ny famolavolan-doha fanindroany tokana. Ny dingana DW-UHF-10KW dia ny famokarana herinaratra matanjaka matanjaka miaraka amin'ny 4mm tokatrano fanodinana solika nampiasaina mba hahatratrarana ny vokatra manaraka.
Vokatra • Noforonina teo ambanin'ny siny ny lakozia tamin'ny alalan'ny fanomezana 95% Nitrogen / 5% Hydrogen amin'ny tahan'ny 25-30 cfh. • Ny tsingerin'ny hafanana dia 10 segondra ihany no ilaina mba hahazoana ny tara-pahazavana ampy izay mihoatra ny fetran'ny 18 segondra.
Sokajy Technologies Tags Hazo mando varatra, Hazo fanondrahana varahina, bozaka varahina, Famolavolana rongony varahina miaraka amin'ny induction, High Frequency Brazing brass, Fiovan'ny hafanana hafanana varahina, RF tapitra, RF induction ny fantson-koditra varahina